ဘတ်ဂျက်သည် Black Hole ဖြစ်လာသည်။ TCDD2ဘီလီယံ 558 ပေါင်အရှုံး | RayHaber
[09 / 12 / 2019] မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးတူရကီရဲ့ပံ့ပိုးမှု	06 တူရကီ
[09 / 12 / 2019] TCDD နှင့်၎င်း၏လက်အောက်ခံ	58 Sivas
[09 / 12 / 2019] TCDD မှမြင့်မားသောဗို့အားသတိပေး!	01 Adana
[09 / 12 / 2019] ဝယ်ယူရန် Konya မြို့ပြဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်း	42 Konya
[09 / 12 / 2019] IETT ယာဉ်များဆောင်းရာသီအဘို့အဆင်သင့်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTCDD2ဘီလီယံ 558 သန်းဆုံးရှုံးမှု
TCDD2ဘီလီယံ 558 သန်းဆုံးရှုံးမှု
18 / 11 / 2019 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD
TCDD2ဘီလီယံ 558 သန်း TL ဆုံးရှုံးမှု တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံဆုံးရှုံးမှုကြီးပွားသတည်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာတွင်းနက်ထဲသို့ပြောင်းသွားသောနိုင်ငံတော်မီးရထားလမ်း၏ပေါင်သန်းပေါင်း2ဘီလီယံသည်ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။
SözcüIsmail Sahin သည်သတင်းများအရ; Kamu ဘဏ္Nာရေးနှင့်ဘဏ္Ministryာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အများပိုင်လုပ်ငန်းများ၏အစီရင်ခံစာအရ 2018 အတွက် 2017 သည်2တွင်ပေါင်ဘီလီယံဘီလီယံဆုံးရှုံးမှုကိုကြေငြာခဲ့ပြီး 2018 ၏အရှုံးမှာ 27 မှပေါင်ဘီလီယံဘီလီယံတွင်တိုးတက်ခဲ့သည်။2သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းက 558 ပေါင်ဘီလီယံအရှုံးရှိ TCDD ဆုံးရှုံးမှု၏စုစုပေါင်းလက်ကျန်ငွေအရှုံးစံချိန်ချိုးခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအရှုံးများကြောင့်ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များကိုမဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည့်အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် ၀ န်ကြီးဌာနများဘတ်ဂျက်မှလွှဲပြောင်းရယူခြင်းနှင့်၎င်း၏အရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ SOE စနစ်အတွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းအများဆုံးသော TCDD သည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကို 2018 တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အေဂျင်စီမှ 2018 နှစ်တွင် 7.4 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါင်ကိုဘဏ္,ာရေးနှင့်ဘဏ္Financeာရေးဝန်ကြီးဌာနမှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
2016 တွင်၊ 25 လူထောင်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် TCDD တွင် ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်မှာ 2017 တွင် 14 တစ်ထောင် 468 သို့လျော့နည်းသွားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 1.4 တစ်ထောင် 14 ဖြစ်ပြီး 263 ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးလျော့နည်းသွားသည်။ 2018 သည်အဖွဲ့အစည်း၏စုစုပေါင်းအလုပ်အသုံးစရိတ်သည် 13.1 ရာခိုင်နှုန်း 1 ဘီလီယံမှ 356 ပေါင်သန်းတိုးခဲ့သည်။ ယခုနှစ် 2018 တွင် TCDD တွင်စုစုပေါင်းသမားရိုးကျ9ထောင်ပေါင်း 131 ကီလိုမီတာနှင့်2ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းရထားလိုင်းများရှိပြီး 396 ထောင်ပေါင်း 11 သည်သမားရိုးကျအဓိကလိုင်းဖြစ်ပြီး 527 ထောင်ပေါင်း 213 သည်အလယ်တန်းဖြစ်သည်။
တနှစ်တွင် TCDD 2016 2.5 ဘီလီယံကိုပေါင်အရှုံးခဲ့ကြသည်:
ဘတ်ဂျက်တစ်နှစ်တာ Approved İETT 2,5 2019 ဘီလီယံကိုပေါင်
Metro စီမံကိန်းကို 1 300 သန်းဘီလီယံကိုပေါင်ဖျက်သိမ်းခြင်းအခကြေးငွေ!
Mega စီမံကိန်းများအတွက်3ဘီလီယံ 650 သန်းလီရာ“ အာမခံချက်” …
အသက်တာ၏ဧဒင် TCDD Kiss ၏ 16 ဘီလီယံပျောက်ဆုံးခြင်း
2019-2020 Metrobus ကြေးလိုင်ရာဘယ်လောက်လဲ .. ?
CHP အထူး - အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်တံတားတင်ဒါများရှိ 7.9
2019 တစ်နှစ်တာဘတ်ဂျက်သန်းထံမှ TCDD 7
မတော်တဆမှုအဘယ်သူမျှမပြောပါသည့်အဆင့် Crossing မှ BTS လူသတ်မှုသို့ပြန်သွားသည်
BOT စီမံကိန်းများအတွက်ခရီးသည်အာမခံချက်များအများပြည်သူ 65 Million …
၀ န်ကြီး Arslan: "လွန်ခဲ့သော 14 နှစ်တွင်တိုင်းပြည်သည်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး
ဝန်ကြီး Arslan: "တစ်နှစ်လျှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် 15" 474 "
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - 2020 နှစ်၏ ၀ န်ထမ်းပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ယူခြင်း
TransportationPark ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကို Kocaeli တွင်စတင်ခဲ့သည်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဒီဇင်ဘာလ 10 1923 တူရကီအမျိုးသားမီးရထား
Manisa Old Garage ရှိအော်တိုစျေးကိုဖွင့်ပါ
ဝယ်ယူရန် Konya မြို့ပြဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်း
Gebze7အထပ်မြင့်ကားရပ်နားရန်ကတ္တရာခင်းထားသည်
Imamoglu မှ ၀ န်ကြီး Turhan သို့ Istanbul ၏တုန့်ပြန်မှု Channel: People ဇွန်လတွင် 23 စီမံကိန်းကိုလူများဖျက်သိမ်း
Channel Istanbul မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကြေငြာခဲ့သည်
Adapazarı Pendik ရထားဇယားများတိုးများလာခဲ့သည်
Burdur Mehmet Akif Ersoy တက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း - တစ်ထပ်တိုက်အဆောက်အ ဦး (TÜVASAŞ)
တင်ဒါအသိပေးချက် - အချက်ပြစီမံကိန်းများ၏နယ်ပယ်အတွင်းဆောက်လုပ်မည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများဆိုင်ရာလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများကို
တင်ဒါကြေငြာချက် - Köseköy Station ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဂိုဒေါင်TVရိယာ CCTV ကင်မရာလုံခြုံရေးစနစ်တပ်ဆင်ခြင်း
၀ ယ်ယူခြင်းအသိပေးချက် - ကားငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ယာဉ်မောင်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကားငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ယူခြင်း
Siirt Airport Terminal အဆောက်အအုံကိုပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့သည်
Nzmir Karabağlar Metro ၏အင်ဂျင်နီယာတင်ဒါအတွက်6ကုမ္ပဏီယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်
UlukışlaBoğazköprüလိုင်း Overpass ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါရလဒ်
TÜBİTAK National Metrology Institute သည် ၀ န်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်
TÜBİTAKသည် Bilgem Technician ကိုငှားရမ်းရမည်
Eskişehir Metropolitan Women Parkomat အရာရှိ Will
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနလက်ထောက်စစ်ဆေးရေး ၀ ယ်ယူရန်
Ankara Metro Stations ရှိလုံခြုံရေးတန်း
မြို့တော်ဝန်Seçerသည် Mersin Metro အတွက်နေ့စွဲကိုပေးသည်
တူရကီရဲ့ဌာနေဒုံးပျံ '' Merlin 'အောင်မြင်စွာပထမပဲ့ထိန်းစမ်းသပ်ခြင်းသေနတ်ပစ်ပြီးစီး
TÜVASAŞ 2020 သင်တန်းသားနွေ ဦး စာရင်းကြေငြာခဲ့သည်
TCDD3။ တိုင်းဒေသကြီးရိုးရာဆောင်း ဦး ရာသီကော်ဇောပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသည်
ဝန်ဆောင်မှုများကို TCDD မှပံ့ပိုးပေးသည်
ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်ဘတ်စ်ကားမောင်းသူများ၏ပြtoနာကို IETT မန်နေဂျာများနားထောင်သည်
Hyundai သည် 2025 Year Strategy ကိုကြေငြာခဲ့သည်
4 ။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ITU ၌လျှပ်စစ်ယာဉ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး 13
FESPA Eurasia ရှိ 250 ထောင်နှင့်ချီသော TL Swarovski ကျောက်တံတား
New Renault Captur သည် Euro NCAP မှကြယ်ငါးပွင့်ရရှိသည်
Ankara Sivas အမြန်ရထားရထားလိုင်း၏နောက်ဆုံးအခြေအနေ
Izmir Denizli ရထားနာရီနှင့်မြေပုံ 2019
Bosphorus Express ရထားဇယားများပြန်လည်စတင်ပါ